Kukho ixabiso leToni ye-B2B kwiMithombo yeendaba yoLuntu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 25, 2015 Douglas Karr
Ezinye izibalo zeMidiya yezeNtlalo ezikhawulezayo:
Iipesenti ezingama-83 zeenkampani zeB2B ngoku thumela kwimidiya yoluntu!
Iipesenti ezingama-77 zeenkampani ze-B2B zilindele wandise ixesha elichithwe kwezentlalo kunyaka olandelayo.
Iipesenti ezingama-35 zeenkampani zeB2B ngoku ubhalisele ukujonga iliso kwimidiya eqongeni.
Njengentengiso ye-B2B ngokwam, ndihlala ndimangalisiwe kukuba iinkampani zentengiso zibona iB2B isalele ngasemva kweB2B. Imithombo yeendaba kwezentlalo yayiyeyona nto iphambili ekuqalisweni nasekukhuleni kwethu kule minyaka idlulileyo. Sinoku kulandelayo okumangalisayo kwi-Twitter, ukusebenzisana okumodareyithayo kwizithuba ze-Facebook eziphilayo, ukujolisa okumangalisayo kwizithuba ezihlawulelweyo ze-Facebook, kunye nokuqhubeka kwengqwalaselo kwi-LinkedIn.
Imidiya yokuncokola isinika amathuba aliqela:
Ukunxibelelana nabaphulaphuli bethu ukuya zichonge iindaba namathuba ukubhala malunga.
Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu ukufumana nokulungisa umxholo omkhulu kubaphulaphuli bethu.
Ukubeka iliso kwimidiya yoluntu ukukhankanywa nokunyuswa komxholo wethu.
Ukunyusa umxholo wethu - zombini eziphilayo kwaye ihlawulwe.
Impembelelo ekujoliswe kuzo amathuba okubandakanya, okwabelana nokwazisa omnye nomnye.
Kwaye, ngokungathanga ngqo, ukukhuthazwa kweemveliso zethu kunye neenkonzo ngokuhambisa imithombo yeendaba zentlalo ekugqibeleni kusinceda ukuba sibekwe ngcono kumajelo eendaba ezentlalo ngokubhekisele kubaphulaphuli bethu ekukhuthazeni ubukho babo bewebhu. Amathuba kukuba, ukuba awukho kwimidiya yoluntu kwaye ungumntu othengisa nge-B2B okanye umthengisi-okhuphisana naye utya isidlo sakho sasemini. Ndingacebisa izinto ezimbalwa ukuqala:
Ukupapasha ngokuzenzekelayo iiposti zebhlog yakho kwiakhawunti yakho ye-Twitter, Facebook kunye ne-LinkedIn.
joyina I-Facebook kunye namaqela e-LinkedIn ngokuthe ngqo kumzi mveliso wakho wokuthatha inxaxheba kuthungelwano olufanelekileyo apho amathemba anokufunyanwa khona.
Qalisa ku landela iinkokheli zeshishini kunye nokwabelana ngomxholo wabo kubaphulaphuli bakho ukunxibelelana nabo.
Ekugqibeleni, bameme Ukubhala iposti yeendwendwe, ukuthatha inxaxheba kudliwanondlebe lwe-podcast, kwiwebhu, okanye nakwitwitter nje.
Injongo yakho ephambili kufuneka ibe kukunyusa ukufikelela kwinethiwekhi kunye negunya lakho ngaphakathi kwenethiwekhi. Xa uchongwa njengesixhobo esithembekileyo, baya besanda abantu abaya kufikelela ukwenza ushishino nawe. Yenza ixabiso ngokubanceda, hayi ngokuthengisa kubo, nangona!
tags: b2bUkuthengisa kwe-b2bb2b intengiso yemidiya yoluntu
Ukwenza uhambo lwabaThengi lube lweLakho